Lesson 1 pakuSvira – Vanoda Zvinhu
Lesson 1 pakuSvira
Kungo nyika mboro chete usati wapuruzira hazvireve chinhu. Kusvira kwakafanana nemutambo webhora Beche ndiro ghedhi. Pafungeiwo dai bhora aive maPena chete taienda kubhora here?
Beche vs Mboro.
Zvinotanga nekick-off (preferably maka mira)
1- Chimbomira kusaidzira chimoko pamubhedha kunge bhinya rabva kuJeri.
2- Bata kumeso kwake zvinyoronyoro wakamutarisa mumaziso. Ukazviita zviribho pakick-off uchanzwa chimoko chichibuditsa kaHigh Pitched sound btwen her Lips.
By this tym u know kuti game ratanga manje.
3- Slowly rub mazamu ari mudhirezi the other hand richipuruzira maLips ake remember izvi urikuzviita zvinyoronyoro.
Occasionaly uchanzwa kaHigh Pitched Sound “HPS” kaye katambotaura nezvako kakafanana neKatsi irikuchemera mukaka.
Zvinoreva kuti u r stil in the game.
4- Fugura dhirezi rake apa weAssume muchiri makamira wopuruzira whole body,
Making tiny circular movements clockwise or anti clockwise whichever way u prefer asika zvinyoro
5- Iye zvino game ravakutopisa manje mutsvode zvinyoronyoro uchurumirira maLips ake usawanze pressure just enuf to coz sensual pain, uchanzwa zvakare kaHigh Pitched Sound kaya katambo taura nezvako kayee.
Varume vazhinji apa ndipo pavanorasika manje coz chimoko chatota vakumhanyira kuda kunogohwesa aiwa chimboitaita pass around even kaback pass kuna keeper.
6- Kana akapfeka dhirezi vhura zipi wakamutarisa mumaziso apa uchiTsvoda futi uchaona achikotsirira izvi zvinoreva kuti dady murikugona basa. Kana wasvika this far hapachina kudzokera shure mwanasikana atoyambuka chave mumusoro make kuSvirwa “kuzvamburwa” kunge mwana abatwa namai achichachura nyama mupoto.
Its now tym to move closer to yo goal. Iye zvino haasisina hembe asara nePant neBra chete kana anemazamu kwawo kurura bra asi wosiya pant riri on ( will explain y layter) By now ndiye akutokudhonzera pamubhedha kana kuti pasofa this is a home and away situation, if u are home pamubhedha if u are away pasi.
Tsvoda Dumbu neMazamu @all tymz kip yo hands occupied.
Kana uri kugona basa uchanzwa kaHPS kaye turning to Moans and Groans izvi zvinoreva kuti daddy murikugona basa.
Now Tsvoda/Nanzva Beche uchitamba nematinji again rumirira just enuf to coz Sensual pain by nw Madam havachagona. Ndambotaura nezve panty ndikati usakurumidze kubvisa vhura makumbo ake as far/wide as they can go; now nyika Mboro zvinyoro nyoro nepaside pepanty iyi inonzi corner kick by nw Mwanaskana haasisina remuromo kana newe uno feeler sence of achievment. Again start off slowly uchiipinza yose woibuditsa, zvinoda Self Control on yo part usanakirwe wobva wati gotsi papata coz unokurumidza kutunda zvikazokuomera,
Isa Mboro yako In & Out slowly slowly after 3-5mins uchidaro, Zvino chitinha sehachi reBorrowdale kaHigh Pitched Sound kaye kamboita turned to moans and groans zvino unonzwa yavemhere. Ukanzwa woda kutunda Stop wombomukisa n then take off the Pant wochinja Position kuisa paI Love You Gear iyi ndiyo inonzi ‘Penalty kick’ Paye paunenge woda kutunda muudze kuti baby ndakuda kutunda uchipuruzira Mhata dzake, kana asina kuaguta chinja Position iye oenda pamusoro oita yekuigarira iyi inonzi ‘Free kick’ kana wadaro wagona mutambo bt zvinoda 25-25minutes or even extra tym kana tim yakabaiwa.
Wapedza zvino unoona ane misodzi mumaziso dnt b confused nemisodzi haisi yekuChema ndeyemufaro.
Gently kiss the tears away bt dont forget kumutarisa mumaziso n tel her tht you love her…….!
One night stand nechisingle Momz chepaden pemuface wangu!
Kusvirwa naDoctor Kuma Avenues!
Next story Makwiriro andakazoita mai Bhoyi ndanwa chimushonga chemustreet!
Previous story Short Story:Ndakabatwa chibharo namaiguru, but ndakazovapedzera!